४४ लागिन् ऐश्वर्या, कसरी अभिनयमा भयो प्रवेश ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१५ कार्तिक २०७४, बुधबार १८:०८
एजेन्सी    कार्तिक १४ ✎
बलिवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आज देखि ४४ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । १ नोभेम्बर सन् १९७३ मा मैंगलोरमा जन्मेकी ऐश्वर्याले सन् १९९७ मा सिनेमा ‘ईरुवर’मार्फत अभिनयमा कदम राखेकी थिईन् । यो तमिल भाषाको सिनेमा हो । हिन्दी भाषामा भने उनको पहिलो सिनेमा ‘और प्यार ओ गया’ (१९९९) हो । बलिवुडमा दुई दशक देखि सक्रिय ऐश्वर्या बाल्यकालमा भने आर्किटेक्ट बन्न चाहन्थिन् । यसको लागि उनले ‘रहेजा कलेज अफ आर्टस’मा एडमिशन समेत गरेकी थिईन् । तर मोडलिङमा लागेका कारण उनले पढाईलाई बीचमै छोड्नुपर्यो ।
ऐश्वर्यालाई मोडलिङ क्षेत्रमा ल्याउन उनकै फिजिक्स टिचरको हात छ । खासमा ऐश्वर्या फिजिक्स टिचरको मन पर्ने बिद्यार्थी थिईन् । उनले भनेपछि ऐश्वर्याल कलेज म्यागजिनको लागि फोटोशुट गरेकी थिईन् । यहि फोटोशुट पछि नै उनलाई मोडलिङमा लाग्ने ईच्छा जागेको थियो । मोडलिङ कदम बढाएकी ऐश्वर्याले सन् १९९१ मा सुपरमोडलको उपाधी जितिन् ।
यो उपाधी जितेपछि उनले वोग म्यागजिनको अमेरिकन एडिशनमा स्थान पाईन् । त्यसपछि उनले सन् १९९३ मा आमिर खानसँग पेप्सीको बिज्ञापनमा काम गर्ने मौका पाईन् । यहि क्रममै उनले सन् १९९४ मा मिस वल्र्डको उपाधी पनि आफ्नो नाम गरिन् ।
ऐश्वर्या भारतमा मात्रै हैन विश्वमै चर्चित छिन् । नेदरल्याण्डमा त उनको नामबाट एउटा फूलको नाम राखिएको छ । ‘ट्युलिप’ले उनको सुन्दरतालाई संकेंत गर्छ । नेदरल्याण्डको ‘बोर्ड अफ टुरिज्मले यसको लागि सेलिब्रेशन समेत गरेको थियो । यसका कार्यकारी निर्देशकले नेदरल्याण्डको ‘ट्युलिप’ ऐश्वर्याको सुन्दरताको प्रतिक भएको बताएका थिए ।
संसारकै सुन्दर महिलाको सूचिमा पर्ने ऐश्वर्याको सुन्दरताको राज के होला ? यो धेरैको मनमा उब्जिने प्रश्न हो । खासमा उनी सधै घरको खाना खान्छिन् । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँछिन् । यसका साथै उनी चिल्लो र फ्राई खानाहरुबाट समेत टाढा रहन्छिन् । खाना पछि उनी फलफूल खानु उनको नियमित शेड्युल नै हो ।